Home Wararka Gudaha .Somaliland oo jawaab yaab leh ka bixisay tallaabadii uu maanta qaaday safiir...
.Somaliland oo jawaab yaab leh ka bixisay tallaabadii uu maanta qaaday safiir Tarsan
War saxaafadeed ay soo saartay dowladda gooni isu taageeda ku dhawaaqday ee Soomaliland ayaa waxa ku sheegtay in ka carootay ficillada uu sameeyay danjiraha Soomaaliya u fadhiya Kenya Ambasadoor Maxamuud Axmed Nuur Tarsan kaas oo maanta ka baxay shir uu madaxweynaha Kenya Uhuru u yeeray ka dib markii uu kulankaasi ku arkay masuuliyiin matalayay jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaannida ee Somaliland.
Somaliland ayaa sheegtay in tallaabadaasi ay caddeyn u tahay cadownimada iyo nacaybka soo jireenka ah ee Soomaaliya ay u qabto Somaliland iyo dadkeeda.
War Saxaafadeedka ayay sidoo kale Somaliland ku sheegtay inay tahay dalmadaxbannaann oo dimuqraaddi ah oo dooneysa in si nabad ah ay kula noolaato waddamada dariska la ah oo ay ku jirto Soomaaliya.
Dhanka kale Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay ka bixitaankii safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya uu maanta ka baxay kulan ay qabanqaabisay wasaaradda Arrimaha Dibedda ee Kenya
Arrrinta ayuu qoraalkaas ku sheegay in loola dan lahaa in xurmad isku mid ah la siiyo danjiraha Soomaaliya iyo qofkaas la casuumay taas oo keentay in Danjire Maxamed Nuur Tarzan uu shirka ka baxo.
Kenya ayaa rasmi ahaan u aqoonsan Somaliland inay tahay gobol ka tirsan Soomaaliya. balse sanadihii dambe ayay Nairobi sare u qaaday xiriirka diblumaasiyadeed ee ay la leedahay Somaliland. Dowladda Soomaaliya ee uu hoggaaminayay Farmaajo ayaa marar badan ku eedeysay Kenya inay farogelin toos ah ku heysa arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Kenya ayaa beenisay eedeyntaasi.
Dowladda Kenya iyo Somaliland midkoodna kama hadlin arrintan u dambeysay. Laakiin wakiilada Somaliland u fadhiya Nayroobi ayaa xaqiijiyay inay casumaad ka heleen madaxtooyada Kenya.
Kenyatta ayaa ku jira gabagabada muddo xileedkiisii u dambeeyay, waxaana Kenya ka socdo olole doorasho oo xoog leh.
Waxaa doorashada soo socoto ku loolami doono, William Ruto oo hadda ah madaxweyne ku xigeenka Kenya iyo Raila Odinga oo hogaamiya xisbiga mucaaradka.
Previous articleLabadda Xildhibaan ee mucjisadda soo bandhigi rabo kunna wajahan Degmadda Jalalaqsi
Next articleKenya oo DF raali-gelin ka siisay dhacdadii calanka Somaliland